မြန်မာပလာဇာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ချက် – Myanmar Media
ယနေ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော အကြောင်းအရာဖြစ်စဥ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာပလာဇာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့မှ အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝလက်ခံထားပြီး ထိုသို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းများအပေါ်တားဆီးပိတ်ပင်သော မူဝါဒများအလျဥ်းမရှိပါ။ ယနေ့ဖြစ်စဥ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် အေးချမ်းစွာပြုမူပြောဆိုဆောင်ရွက်ရမည့်အစား မသင့်တော်လွဲမှားစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုသိရှိရသည့်အတွက် အထူးပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။
အထက်ပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် အများပြည်သူအနေဖြင့် မည်သို့ခံစားရသည်ကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည့်အပေါ် မြန်မာပလာဇာမှ အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ဖြစ်စဥ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သူလူငယ်များအားလုံးသည်လည်း ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ခဏတာအတွင်း တစ်စုံတစ်ရာအန္တရာယ်မရှိဘဲ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းကို အသိပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာပလာဇာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်ကိုသေချာစွာသုံးသပ်ပြီး ထိုသို့ မလျော်မကန်သောအပြုအမူများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် တာဝန်ရှိသူများကို ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် တာဝန်ခံမှုများကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
The Management of Myanmar Plaza is fully aware of the incident that happened this afternoon, and we are investigating the matter seriously.
We believe in the expression of opinions & views inapeaceful manner. We are sorry that our site personnel acted in an inappropriate manner against such activity this afternoon.
We fully understand and acknowledge the feelings of the affected people. The young people involved were escorted peacefully away.
The management of Myanmar Plaza will reflect on this incident and strive to increase our staff training so as to serve our visitors and the public better.
တအိအိက်ဆင္းလာေနတဲ့ ျပည္တြင္း အေခါက္ေ႐ႊေဈး
တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ ၂၂သိန္းအထိ စံခ်ိန္တင္တက္ခဲ့တဲ့ အေခါက္ေ႐ႊေဈးဟာ ေငြက်ပ္ ၁၈သိန္းအထိ တအိအိက်ဆင္းသြားၿပီး ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္အေရာက္မွာေတာ့ အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို ၁၇၇၀၀၀၀ က်ပ္ထိ က်ဆင္းလာတာေတြ႕ရပါတယ္။
ကမ႓ာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က တစ္ေအာင္စကို ၁၈၀၈ ေဒၚလာ႐ွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တစ္ေအာင္စကို ၁၇၉၃ ေဒၚလာထိ က်ဆင္းလာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။
ေ႐ႊကုန္သည္တစ္ဦးက ”အေခါက္ေ႐ႊေဈးဟာ တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္တစ္ဆယ့္႐ွစ္သိန္းပါတ္ ခ်ာလည္ ေဈး႐ွိေနတာ ၁ လခြဲကာလ႐ွိေနၿပီး အခု ေငြက်ပ္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္သိန္းေအာက္ကို တျဖည္းျဖည္းဆက္က်ေနတာ၊ ကမ႓ာ့ေ႐ႊေဈးဟာလည္း အခုရက္ပိုင္းအတြင္း အနည္းငယ္က်ဆင္းေနတာ႐ွိတယ္လို႔”ေျပာပါတယ္။
ေ႐ႊအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးက ”အေရာင္းအဝယ္က ပုံမွန္ပဲ ေ႐ႊေဈးအတက္အက်ၾကမ္းတဲ့ကာလေတြတုန္းကနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေတာ္ေလးက်သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္လို႔”ေျပာျပပါတယ္။
ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းဟာဆိုရင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ကန္တစ္ေဒၚလာ ဝယ္ေစ်း ၁၇၉၀ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေစ်း ၁၇၉၂ က်ပ္႐ွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫြန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ကန္တစ္ေဒၚလာ ၁၇၈၈.၃ က်ပ္သတ္မွတ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
အိန္ဒိယ Vaibhav ကုမ္ပဏီက မြန်မာ့ကျောက်မျက်ကို အရောင်းစာရင်းမှ ဖယ်ရှာ
တအိအိကျဆင်းလာနေတဲ့ ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေး အခြေအနေ